ဝက်ခြံအရမ်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီ (၆) ချက်ကို လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်။ - For her Myanmar
လုပ်နေကျအချက်တွေက သေချာရှောင်ရမယ့်အချက်ထဲ ပါနေတယ်တော့
ဝက်ခြံဆိုတဲ့အမျိုးကလေ လူ့စိတ်လိုပဲ အစိုးမရတဲ့ သဘောတစ်ခုမှာရှိနေတယ် ဟုတ်? အိမ်မှာနေရင်း မျက်နှာကို ကြည့်တော့ မှန်လိုပဲ ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေပေမဲ့ ဟော နောက်နေ့ သွားစရာလည်း ရှိပြီဆိုရော.. ဟိုတစ်နေရာ၊ ဒီတစ်နေရာ ကွက်ထပြီး ပေါက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုး။
အဲ့လို အစိုးမရတဲ့ ဝက်ခြံတွေ မြန်မြန်ပျောက်ဖို့အရေး ငါ့အရေးဆိုပြီး အတင်းကာရောပျောက်အောင် လုပ်တတ်ကြရင်း တချို့ဟာတွေကျ ပျောက်အောင်လုပ်ရင်းကနေ ပိုဆိုးသွားအောင် လုပ်မိသလို ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အကွက်လေးတွေလည်းရှိတော့ ရှောင်စရာရှိရှောင်၊ ဆောင်စရာရှိတာဆောင်လို့ရအောင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
တခြားအချက်တွေမဖတ်ခင်မှာ ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့အချိန် ချက်ချင်းပျောက်သွားအောင် လုပ်တာထက် အရင်ဆုံးနီမြန်းရောင်ရမ်းနေတာကို လျော့သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ အမာရွတ်ပျောက်တဲ့အထိ ဖြည်းဖြည်းချင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကုတာက အမှန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါပဲနော်။ ကဲ ကဲ.. ဒါဆို နည်းလမ်းလေးတွေ ကြည့်ကြရအောင်နော်..
(၁) အမည်းစက်ပျောက်ဆေးတွေကို ခဏခဏလိမ်းတာ။
ဝက်ခြံအနောက်မှာ ကပ်ပါလာတတ်တာက အမည်းစက်လို့ခေါ်တဲ့ အစက်လေးတွေပါ။ အဲဒီအစက်လေးတွေကို ဝက်ခြံပျောက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတည်းပျောက်သွားအောင် အဲဒါကိုပါ ရောရောပြီးလိမ်းတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီလိုအပြုအမူက အရမ်းမှားတဲ့ အပြုအမူကြီးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမည်းစက်ပျောက်တဲ့ skincare တွေမှာ အသားဖြူစေတဲ့ Vitamin C တို့ အသားကို အပေါ်ယံ အရေပြားတစ်လွှာကွာကျစေတဲ့ peeling effect တို့ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေက ဝက်ခြံသမားတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘဲ ဝက်ခြံတွေကို ပိုဆိုးစေတာမို့ ဒါမျိုးလေးတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်နော်။
(၂) ဝက်ခြံထွက်မှ ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေကို လိမ်းတာ။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်း၏ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလိုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ… ဝက်ခြံတွေကို ဖြစ်မှကုတာထက် နေ့တိုင်းပိုးသတ်ပေးနိုင်မယ့် Salicylic Acid ပါဝင်တဲ့စကွင်းကဲတွေကို နေ့တိုင်းသုံးပေးတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်နော်။ အက်စစ်ဆိုလို့ လန့်မသွားနဲ့ဦး။ သူက အားပျော့ပြီး ယောင်းတို့အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့အက်စစ်ပါလို့။ Salicylic Acid တွေက အသားခြောက်တတ်တာမျိုးတွေ၊ လိုအပ်တာထက် ပိုသုံးမိရင် အသားအရေ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်လို့ သုံးမယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏအတိုင်း ကွက်တိသုံးတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်… တန်ဆေးလွန်ဘေး မဟုတ်လား…
(၃) ဝက်ခြံတွေကို Scrub နဲ့စွတ်တိုက်တာ။
Scrub ဆိုတာ ဆပ်ပြာကိုမှ ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးနိုင်အောင် အခွံမာတစ်ခုခုကို ကြိတ်ထည့်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာမို့ ဝက်ခြံထွက်ပြီး ဆန်းဆန်းတင့်နေတဲ့အသားအေရကို ဒီဆပ်ပြာကြမ်းကြီးနဲ့စွတ်တိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာကပိုထိခိုက်လွယ်ပြီး ဝက်ခြံကလည်းပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျောက်ချင်ဇောနဲ့ စွတ်လုပ်တာမျိုးကို ရှောင်ရမယ်နော်။ Scrub တိုက်လို့ မရဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. စွတ်မလုပ်ဖို့ပဲ မှာတာပါ။
(၄) လက်နဲ့ညှစ်တာ၊ ကုတ်တာ။
ဒါကတော့ လူတိုင်းနီးပါး ပြောတတ်ကြတဲ့အချက်ဆိုပေမဲ့ အရမ်းလွယ်လို့လာမသိဘူး ဘယ်သူမှလည်း မလုပ်နိုင်ကြဘူး :3 (နှင်းအပါအဝင်ပေါ့ :P) သေချာပိုးသတ်ပြီး ဆေးကြောထားတဲ့ ဝက်ခြံညှစ်တံနဲ့ ညှစ်ရင်တောင် အခန့်မသင့်ရင် အမာရွတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ မျက်နှာကြီးမှာ ပိုးမွှားသောင်းခြောက်ထောင်ကပ်နေတဲ့ လက်ကို သုံးပြီး ဝက်ခြံညှစ်မယ်ဆိုရင်တော့… အင်းးးး။
(၅) တွေ့သမျှ Skincare အလွယ်လမ်းတွေကို ယုံပြီးလိုက်လုပ်တာ။
ထွက်တဲ့ဝက်ခြံ တစ်ဖုနှစ်ဖုလောက်ကို အမြန်ပျောက်ချင်ဇောနဲ့ ရှိသမျှ ဗီဒီယိုထဲက အလွယ်လမ်းတွေ၊ ဘေးစကားတွေကိုနားယောင်ပြီး စွတ်လုပ်လို့ကတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီသာမှတ်တော့ ယောင်းရေ။ သူ့အသားအရေနဲ့ ကိုယ့်အသားအရေကမတူတာမို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ပဲပျောက်အောင်လုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါလို့။
Related Article >>> ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဘိုင့်ဘိုင့်လုပ်ကြမယ်
လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်။ ဝက်ခြံကလေ အသားအရေအပူချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ပိုပြီးနီမြန်းတဲ့အပြင် ပိုလည်းပွားတတ်တဲ့ သဘာဝရှိပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် အဆီပိုပြန်တဲ့အချိန်မှာ ဝက်ခြံက ပိုထွက်တတ်သေး။ အဲဒါကို ဝက်ခြံပေါက်တဲ့အချိန်မှာ ရှိရှိသမျှ စကွင်းကဲအဆင့်တွေကို ဖြတ်ပြီး ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတစ်မျိုးပဲ လိမ်းရင်တော့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှန်းမသိ၊ အဆီမရှိမှန်းမသိ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေက အဆီတွေထပ်ထုတ်၊ အဆီပိုပြန်တော့ ဝက်ခြံထပ်ထွက်ရင်း ဂျာအေးအမေရိုက်ပါလေသတည်းပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်… ဒါကြောင့် ရေဓာတ်ကို ပုံမှန်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်လို့…
ခြုံပြောရရင်တော့ ဝက်ခြံထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတစ်မျိုးတည်းသုံးတာမျိုးကို ရှောင်ပြီး ဆီကြော်စာအပါအဝင် အငန်တွေ၊ အစပ်တွေမစားဘဲ အသားအရေကို ရေဓာတ်လေးကောင်းကောင်းဖြည့်ပြီး ပုံမှန်လေးပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းဂရုစိုက်ရင် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့။ အဆင်ပြေကြပါစေနော်…
လုပျနကေအြခကျြတှကေ သခြောရှောငျရမယျ့အခကျြထဲ ပါနတေယျတော့
ဝကျခွံဆိုတဲ့အမြိုးကလေ လူ့စိတျလိုပဲ အစိုးမရတဲ့ သဘောတဈခုမှာရှိနတေယျ ဟုတျ? အိမျမှာနရေငျး မကျြနှာကို ကွညျ့တော့ မှနျလိုပဲ ကွညျလငျရှငျးသနျ့နပေမေဲ့ ဟော နောကျနေ့ သှားစရာလညျး ရှိပွီဆိုရော.. ဟိုတဈနရော၊ ဒီတဈနရော ကှကျထပွီး ပေါကျလာတာမြိုးဖွဈတတျတာကိုး။
အဲ့လို အစိုးမရတဲ့ ဝကျခွံတှေ မွနျမွနျပြောကျဖို့အရေး ငါ့အရေးဆိုပွီး အတငျးကာရောပြောကျအောငျ လုပျတတျကွရငျး တခြို့ဟာတှကြေ ပြောကျအောငျလုပျရငျးကနေ ပိုဆိုးသှားအောငျ လုပျမိသလို ဖွဈသှားတတျတဲ့ အကှကျလေးတှလေညျးရှိတော့ ရှောငျစရာရှိရှောငျ၊ ဆောငျစရာရှိတာဆောငျလို့ရအောငျ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးပေးလိုကျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
တခွားအခကျြတှမေဖတျခငျမှာ ဝကျခွံပေါကျနတေဲ့အခြိနျ ခကျြခငျြးပြောကျသှားအောငျ လုပျတာထကျ အရငျဆုံးနီမွနျးရောငျရမျးနတောကို လြော့သှားအောငျလုပျပွီးတော့မှ အမာရှတျပြောကျတဲ့အထိ ဖွညျးဖွညျးခငျြး စိတျရှညျရှညျနဲ့ကုတာက အမှနျဆုံးနဲ့ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးပါပဲနျော။ ကဲ ကဲ.. ဒါဆို နညျးလမျးလေးတှေ ကွညျ့ကွရအောငျနျော..
(၁) အမညျးစကျပြောကျဆေးတှကေို ခဏခဏလိမျးတာ။
ဝကျခွံအနောကျမှာ ကပျပါလာတတျတာက အမညျးစကျလို့ချေါတဲ့ အစကျလေးတှပေါ။ အဲဒီအစကျလေးတှကေို ဝကျခွံပြောကျတဲ့အခြိနျမှာ တဈခါတညျးပြောကျသှားအောငျ အဲဒါကိုပါ ရောရောပွီးလိမျးတတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ ဒီလိုအပွုအမူက အရမျးမှားတဲ့ အပွုအမူကွီးပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အမညျးစကျပြောကျတဲ့ skincare တှမှော အသားဖွူစတေဲ့ Vitamin C တို့ အသားကို အပျေါယံ အရပွေားတဈလှာကှာကစြတေဲ့ peeling effect တို့ပါဝငျနတေတျပါတယျ။ ဒီဓာတျတှကေ ဝကျခွံသမားတှနေဲ့ ဓာတျမတညျ့ဘဲ ဝကျခွံတှကေို ပိုဆိုးစတောမို့ ဒါမြိုးလေးတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျနျော။
(၂) ဝကျခွံထှကျမှ ဝကျခွံပြောကျဆေးတှကေို လိမျးတာ။
ကွိုတငျကာကှယျခွငျးသညျ ကုသခွငျးထကျ ကောငျး၏ ဆိုတဲ့စကားအတိုငျးလိုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ… ဝကျခွံတှကေို ဖွဈမှကုတာထကျ နတေို့ငျးပိုးသတျပေးနိုငျမယျ့ Salicylic Acid ပါဝငျတဲ့စကှငျးကဲတှကေို နတေို့ငျးသုံးပေးတာက ပိုပွီးအဆငျပွစေပေါလိမျ့မယျနျော။ အကျစဈဆိုလို့ လနျ့မသှားနဲ့ဦး။ သူက အားပြော့ပွီး ယောငျးတို့အသားအရအေတှကျ လိုအပျတဲ့အကျစဈပါလို့။ Salicylic Acid တှကေ အသားခွောကျတတျတာမြိုးတှေ၊ လိုအပျတာထကျ ပိုသုံးမိရငျ အသားအရေ စပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈတာမြိုးတှလေညျး ရှိတတျလို့ သုံးမယျဆိုရငျ ကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီးမှ လိုအပျတဲ့ ပမာဏအတိုငျး ကှကျတိသုံးတာ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျနျော… တနျဆေးလှနျဘေး မဟုတျလား…
Related Article >>> ဝကျခွံဟာ ရှကျစရာလား
(၃) ဝကျခွံတှကေို Scrub နဲ့စှတျတိုကျတာ။
Scrub ဆိုတာ ဆပျပွာကိုမှ ခြှေးပေါကျအတှငျးပိုငျးအထိ သနျ့စငျပေးနိုငျအောငျ အခှံမာတဈခုခုကို ကွိတျထညျ့ထားတဲ့ ဆပျပွာမို့ ဝကျခွံထှကျပွီး ဆနျးဆနျးတငျ့နတေဲ့အသားအရေကို ဒီဆပျပွာကွမျးကွီးနဲ့စှတျတိုကျတဲ့အခါ မကျြနှာကပိုထိခိုကျလှယျပွီး ဝကျခွံကလညျးပိုဆိုးလာနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပြောကျခငျြဇောနဲ့ စှတျလုပျတာမြိုးကို ရှောငျရမယျနျော။ Scrub တိုကျလို့ မရဘူးလို့ ပွောတာ မဟုတျဘူးနျော.. စှတျမလုပျဖို့ပဲ မှာတာပါ။
(၄) လကျနဲ့ညှဈတာ၊ ကုတျတာ။
ဒါကတော့ လူတိုငျးနီးပါး ပွောတတျကွတဲ့အခကျြဆိုပမေဲ့ အရမျးလှယျလို့လာမသိဘူး ဘယျသူမှလညျး မလုပျနိုငျကွဘူး :3 (နှငျးအပါအဝငျပေါ့ :P) သခြောပိုးသတျပွီး ဆေးကွောထားတဲ့ ဝကျခွံညှဈတံနဲ့ ညှဈရငျတောငျ အခနျ့မသငျ့ရငျ အမာရှတျဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ မကျြနှာကွီးမှာ ပိုးမှားသောငျးခွောကျထောငျကပျနတေဲ့ လကျကို သုံးပွီး ဝကျခွံညှဈမယျဆိုရငျတော့… အငျးးးး။
(၅) တှသေ့မြှ Skincare အလှယျလမျးတှကေို ယုံပွီးလိုကျလုပျတာ။
ထှကျတဲ့ဝကျခွံ တဈဖုနှဈဖုလောကျကို အမွနျပြောကျခငျြဇောနဲ့ ရှိသမြှ ဗီဒီယိုထဲက အလှယျလမျးတှေ၊ ဘေးစကားတှကေိုနားယောငျပွီး စှတျလုပျလို့ကတော့ ဒုက်ခရောကျပွီသာမှတျတော့ ယောငျးရေ။ သူ့အသားအရနေဲ့ ကိုယျ့အသားအရကေမတူတာမို့ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ပဲပြောကျအောငျလုပျတာက အကောငျးဆုံးပါလို့။
Related Article >>> ဝကျခွံအမာရှတျတှကေို ဘိုငျ့ဘိုငျ့လုပျကွမယျ
လြှို့ဝှကျခကျြတဈခုပွောပွမယျ။ ဝကျခွံကလေ အသားအရအေပူခြိနျမွငျ့နတေဲ့အခြိနျမှာဆိုရငျ ပိုပွီးနီမွနျးတဲ့အပွငျ ပိုလညျးပှားတတျတဲ့ သဘာဝရှိပါတယျနျော။ ဒါ့အပွငျ အဆီပိုပွနျတဲ့အခြိနျမှာ ဝကျခွံက ပိုထှကျတတျသေး။ အဲဒါကို ဝကျခွံပေါကျတဲ့အခြိနျမှာ ရှိရှိသမြှ စကှငျးကဲအဆငျ့တှကေို ဖွတျပွီး ဝကျခွံပြောကျဆေးတဈမြိုးပဲ လိမျးရငျတော့ ရဓောတျခနျးခွောကျမှနျးမသိ၊ အဆီမရှိမှနျးမသိ မကျြနှာမှာရှိတဲ့ ဆဲလျတှကေ အဆီတှထေပျထုတျ၊ အဆီပိုပွနျတော့ ဝကျခွံထပျထှကျရငျး ဂြာအေးအမရေိုကျပါလသေတညျးပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ… ဒါကွောငျ့ ရဓောတျကို ပုံမှနျဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့လညျး လိုအပျပါတယျလို့…
ခွုံပွောရရငျတော့ ဝကျခွံထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဝကျခွံပြောကျဆေးတဈမြိုးတညျးသုံးတာမြိုးကို ရှောငျပွီး ဆီကွျောစာအပါအဝငျ အငနျတှေ၊ အစပျတှမေစားဘဲ အသားအရကေို ရဓောတျလေးကောငျးကောငျးဖွညျ့ပွီး ပုံမှနျလေးပဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြးဂရုစိုကျရငျ ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျလို့။ အဆငျပွကွေပါစနေျော…
Tags: acne, avoid, don'ts, must, skincare, tips